အာရှတလွှား | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 134
တရားသော ဥပဒေ တရားသော စီရင်မှု တူမောင်ညို။ (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၆ ရက်) လွန်ခဲ့သော မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က၊ မိတ္တီလာမြို့ —- ရွှေဆိုင်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်ရပ်သည် မှုခင်းအသေးအဖွဲမျှသာဖြစ်ပါ သည်။ ပြည်သူများအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားသည့် အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခမှ တဆင့်တက်၍ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားဖြစ်ခြင်း သာဖြစ်သည်။ သို့အတွက် ထိခိုက်နစ်နာသူများဘက်မှ အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုလျှင် တရားရုံးက လက်ခံကြားနာစစ်ဆေးပြီး ကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှု နှင့်ဆီလျော်သည့်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ချက်ချမှတ်ပေးလိုက်လျှင် ပြီးပြတ်ပြေငြိမ်းသွားနိုင်သည့် အမှုမျိုးသာဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယခုတော့ မြေခွေးလို အကွက်ချောင်းနေသူ အကြမ်းဖက်သမားများက သာမန် မှုခင်းအသေးအဖွဲကလေးကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်မီးရှို့မှု သောင်းကျန်းမှုကြီးအဖြစ်သို့ ချဲ့ထွင်လုပ်ကြံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်အထိ ယင်းသို့ လူသတ်မီးရှို့ခဲ့ကြသော အကြမ်းဖက်သမား၊ သောင်းကျန်းသူ...
ငါးများဆောင်းလူဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ ဟိုသွား ..ဒီသွားသင်္ကြန်တွင်းမှာ သူတို့ရေယက်မလိုပါးဟက်မလိုခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် လမ်းမပေါ်တွားသွားနေလိုက်ကြတာ …။ ပျော်ပျော်ကြီးမော်မော်ပြီးရင်ခွဲရုံရောက်နေတဲ့ ပိတောက်တွေအစားငုတွေက ဧည့်ခံရောက်လာတဲ့ ငါးတွေကရေကသိုင်းရှုဖို့များနက်ခ်တိုင်ကိုယ်စီနဲ့စတိုင်လ်ကိုမိလို့ …။ ငါးတွေဇာတ်တူသားကိုမှမြိန်ရည် ယှက်ရည် စားလိုသတဲ့ …။ ငါးတွေတီတွေနဲ့ မိတ်ဖွဲ့ဟိုးတုန်းကတော့ အိမ်လွမ်းလို့တဲ့ …။ ခုလည်း ကြည့်သူတို့ …လူမျှားချိတ်ကို လည်ပင်းချိတ်လူမျှားထွက်မလို့နက်ခ်တိုင်ကိုယ်စီနဲ့တွားသွားနေလိုက်ကြတာ …။ အော် … ငါးတွေခုတော့ .. ဥပုဒ်တဖက်နဲ့ခွက်ခြင်းတိုက်လို့အမြည်းလုပ်ဖို့များလူကင်ဖို့ လုပ်နေသတဲ့ …။ No tags for this post.
ရှင်ကွဲ သေကွဲအရပ်မှာ … ပိတောက်တွေ ပွင့်တဲ့အခါ ကမာပုလဲ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၃ အမေကလည်း ဗျာ ဒီလို အခါကြီး ရက်ကြီးကျမှ သေရသတဲ့လား …။သင်္ကြန်တဲ့ ကျနော့်မှာ မျက်ရည်နဲ့သာ ပက်ခွင့်ရခဲ့တယ် …။ ။ (ဒီနေ့မှာ သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အမေ့ရဲ့ ကျနော်လိုက်မပို့နိုင်သော ဈာပနအခမ်းအနား …. သို့) No tags for this post.
ဦးတည်ချက် ၃ ရပ်ဖြင့် “၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေ” ပြင်ဆင်ရေး တူမောင်ညို (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၀ ရက်) လွှတ်တော်ထဲတွင် “၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေ”ပြင်ဆင်ရေးဆိုသည်မှာ လွယ်ကူသည့် ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ လွှတ်တော်အမတ် “၃၉” ဦး က ပြင်ဆင်လိုသည့် ဆန္ဒရှိယုံမျှဖြင့်လည်း ပြင်ဆင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ လွှတ်တော်ထဲတွင် “၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေ” ပြင်ဆင်ရေးဆိုသည်မှာ ကြံ့ဖွံ့ ပါတီနှင့် ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်၏စစ်သားအမတ်တွေ (ဦးဝင်းတင် စကားနဲ့ပြောရလျှင်“မရွေးအမတ်”တွေ) လက်ထဲမှာရှိနေသည့်အရာဖြစ် သည်။ မည်သူမဆို/မည်သည့်ပါတီမဆို “၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေ”ကို အခြေခံကျကျပြင်ဆင်မည်ဟုဆိုလျှင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီနဲ့ အခြေခံကျကျ ထိပ်တိုက်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်နှင့်လည်း အခြေခံကျကျထိပ်တိုက်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ထိထိမိမိပြင်ဆင်မည်ဆိုလျှင်ပီပီပြင်ပြင် ထိပ်တိုက်တွေ့ကြရလိမ့်မည်။ မည်သို့မျှ ရှောင်လွှဲ၍ မရနိုင်။ “၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေ”ကို ပြင်ဆင်သည့်အခါ အောက်ပါဦးတည်ချက်...
ကမ္ဘာကြီးကို စစ်ကြေငြာလိုက်တဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ဇော်အောင် (မုံရွာ)၊ ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၃ မြောက်ကိုးရီးယားက အမေရိကန်ကို စစ်ကြေငြာလိုက်တယ်… ဆိုတဲ့ သတင်း၊ သတင်းစာထဲ မမြင်လိုက်လို့ အင်တာနက်မှာ အတင်းလိုက်ရှာတော့၊ ပဋိပက္ခ အကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတာ ။ စစ်သည်တော် အင်အားကိုပဲ ကြည့်ပြီး ခြေလျှင်တပ်နဲ့ တောင်ကိုးရီးယားမြို့တော်ကို အလွယ်တကူဝင်သိမ်း၊ အနိုင်ယူမယ် ဆိုတဲ့ သမရိုးကျ မြောက်ကိုးရီးယားရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုပါ။ တရုတ်ရဲ့တပည့် ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲ မွဲတေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ သယံဇာတ ကြွယ်ဝပေမဲ့ အားလုံးစစ်ရေးမှာပဲ သုံးပစ်ပြီး အသက်၂၉နှစ်သား Kim Jong-un ကို ဘုရင်ပုံစံ ခေါင်းဆောင်တင်ထားတဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း မြောက်ကိုးရီးယားကို ထိန်းမရနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ အထက်ပါ ဇယားကိုကြည့်ရင် ခြေလျှင်တပ် တစ်သန်းတစ်သိန်း နဲ့...
ရှင်ကွဲ သေကွဲအရပ်မှာ … ပိတောက်တွေ ပွင့်တဲ့အခါကမာပုလဲဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၃ အမေကလည်း ဗျာဒီလို အခါကြီး ရက်ကြီးကျမှ သေရသတဲ့လား …။ သင်္ကြန်တဲ့ကျနော့်မှာ မျက်ရည်နဲ့သာ ပက်ခွင့်ရခဲ့တယ် …။ ။ (ဒီနေ့မှာ သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အမေ့ရဲ့ ကျနော်လိုက်မပို့နိုင်သော ဈာပနအခမ်းအနား …. သို့) No tags for this post.
ပိတောက် … စကားကမာပုလဲဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၃ ကျနော်တို့ ပိတောက်ကိုလွမ်းရင်းပိတောက်အကြောင်း ကဗျာရေးခဲ့တယ် …။ ကျနော်တို့ဟာအမေ့ကို လွမ်းရင်းသင်္ကြန်ကို ချစ်ခဲ့ကြသူတွေပေါ့ …။ “ရာသီစာ” လို့ ညွှန်းညွှန်း“ရာသီဆာ” ပဲ ဆိုဆို …။ကျနော်တို့ ပိတောက်ကို ချစ်ခဲ့တယ် …။ “ဒါ … ငှက်ဖျားငန်းဖမ်းဇာတ်ပဲ ”တောင်ပေါ်မှာ ကျွန်းတွေ အပွင့်ပွင့်ချိန်အမေ့အိမ်ကို …ကျနော်တို့ “ တူးပို့ … တူးပို့ ” နဲ့လွမ်းခဲ့တယ် …။ ပိတောက်ပွင့်ကလေးတွေ ဖင်ဆိတ်ပြီးသူ့အစီးနဲ့ …ကျနော်တို့ နဖူး … ပါးပြင်ကလေးပေါ် တို့တို့ပေးတော့ကျနော်တို့မျက်နှာ တပြင်လုံးအမေ့ အချစ်နဲ့ ပိတောက်တွေပွင့်ကျနော်တို့ အားလုံး ပိတောက်ပင်တွေ ဖြစ်အဲဒါ …သင်္ကြန်ဖြစ်ခဲ့တယ် …။ ။ + (+)...
Tu Maung Nyo – Changing Regime Constitution with3objectives
Page 134 of 153«1...132133134135136...153»